Ntuziaka injinia | Ule & Nlele nkwado nke injinia - Mepụta ihe - Mepụta ihepropro Tech Tech, Ltd.
IHE ND NA-EME / Nyocha Nyocha
Na CreateProto, anyị nwere ike oyiri na / ma ọ bụ mepụta mmecha ọ bụla enwere ike rụpụta na mmepụta, ebe anyị na-adị n'ime ọtụtụ ụdị ngosipụta. Anyị achịkọtara ụfọdụ n'ime ihe atụ kachasị amasị anyị kachasị mma nke ga-akachapụrụ gị nhọrọ maka ngwa gị.
Jiri Engineering Prototypes iji Gbaa mbọ hụ na a rụpụtara maka nrụpụta
Mee ka nkwenye gị kwalite site na nyocha nyocha
Dika mmepe ngwaahịa na-abanye n'ime usoro ndị sochirinụ, ọ na-adịwanye mkpa ịmalite mmemme nyocha nke ngwaahịa na-enye nnwale na nsonaazụ nyocha.
Injinia na nyocha ihe nyocha bụ ule nnwale ngwaahịa akọwapụtara nke a na-egosi na injinia prototypes ma ọ bụ tupu mmepụta ihe. Ha nwere ike ịchọpụta ma imepụta ahụ na-ezute nkọwa ngwaahịa na arụmọrụ a tụrụ anya ya, nke gụnyere nnwale arụmọrụ bụ isi, usoro nrụpụta, nha nrụpụta arụmọrụ na nnabata asambodo.
Ka usoro nkwado ahụ na-esite na injinia prototype site na njikwa injinia (EVT), nkwado imewe (DVT), yana mmepụta mmepụta (PVT), ngalaba nke ọ bụla na-elekwasị anya na ịhazi nhazi na mmepụta. Iji mee ka imepụta ihe dị irè nke ọma, toaa ntị nke ọma na isi ihe atọ dị na atụmatụ gị: arụmọrụ, nrụpụta na ịdị uchu.
Iwuli Mgbasa Injinia Nwere Ike Yourbụ Ngwọta Kacha Mma Gị
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịtụle ụkpụrụ nkwado ma ọ bụ ụzọ nkwado maka ngwaahịa gị n'isi usoro mmepe. Mgbe oge na ọnụahịa nke ime mgbanwe mgbanwe na-achọwanyewanye, na -emepụta ụdị nrụpụta injinia dị elu nke na-anọchi anya ngwaahịa ikpeazụ, na-eme ka ọ dị mfe nyocha njirimara, injinia, na imepụta ihe, tupu itinye ego na ngwaọrụ dị oke ọnụ ma tinye ha na mmepụta.
Ihe ngosi a na-arụ ọrụ nke ọma na nke ziri ezi nke ọma ma ọ bụ ihe eji emepụta ngwa ngwa na-ejikọtakarị ọtụtụ ihe dị iche iche na akụkụ igwe na-akpụ akpụ. Mostzọ kachasị dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma iji mepụta ihe dị iche iche na usoro na ihe ga-enyocha iji hụ na ngwụcha ngwụcha gosipụtara ngwaahịa a. Ọ-enye gị ohere ịrụ rigorous ule na nkwenye tupu anapụta gị imewe ka n'ichepụta.
Prototyping Onye Mmekọ N'ihi na gị Engineering / Design Nyocha
N'ihe karịrị afọ 20 nke injinịa na ịme ihe atụ, Mepụta ihe na-eto eto na-arụ ọrụ nke ọma maka injinia ngosipụta.
Anyị na-echepụta azịza ngwangwa maka ọrụ mmepe iji weta ngwaahịa gị na usoro nkwado ikpeazụ. Anyị nwere ike iji ahụmịhe anyị na teknụzụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu nke CNC, na-arụ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa na ịkpụzi ngwa ngwa, na-enye ndụmọdụ kachasị mma na akụrụngwa dịka akụrụngwa, usoro, ndidi, na ịkọ nsogbu nwere ike inye aka mee ka nsogbu injinia gị nwee.
Site na ndị injinia ọkachamara na ndị njikwa ọrụ, CreateProto enweghị atụ na ntinye ngwaahịa ma na-ejigide mmekorita na-enweghị ntụpọ na ndị ahịa, nwee ike inye nkwado na-aga n'ihu na mmepe ngwaahịa ahụ.
3 Testdị Ule nke usoro nyocha
Nnwale Nyocha Injinia (EVT)
Ihe ndị EVT na-ewu bụ ihe ngosipụta injinia site na CNC machining, nkedo agụụ, ma ọ bụ ngwa ọrụ mmiri. Ọ chọrọ mmepụta ebumnuche mmepụta na usoro nrụpụta mgbe ọ bụla enwere ike. Mana akụkụ 3D enweghị ike itinye n'ọrụ na EVT.
Elezie 20-100 nkeji
Nkeji ga-arụ ọrụ zuru oke ma nwee nnwale
Jiri nkwenye siri ike iji zute nkọwa arụmọrụ
A na-enyocha data ule iji hụ na arụzuru ọrụ achọrọ, ule ndị bụ isi gụnyere ike, ọkụ, na EMI
Kpughee adịghị ike imewe adịghị ike ma kwado mgbanwe ndị nwere ike ịkwalite ngwaahịa a
Ọ na-adịkarị ịme ụlọ nke abụọ EVT mgbe emechara mgbanwe.
Ule Nlereanya Nyocha (DVT)
Ihe DVT na-ewuli gunyere nkpuru ikpeazu nke ihe nile na ihe okike dika o kwere mee. Ọ na-akwado usoro mmepụta nke ngwaahịa ndị a site na saịtị ndị na-arụ ọrụ na-agba ọsọ dị ala. A na - ebu ụzọ rụọ ọrụ tupu ịkpụzi ngwa ngwa ma ọ bụ nrụpụta obere olu wee soro usoro mmepụta.
Elezie 100-1000 nkeji
Akụkụ niile kwesịrị ịbụ site na ngwa ọrụ ebu ma ọ bụ usoro nrụpụta tupu
Gbaa mbọ hụ na ngwaahịa mezuru ihe achọrọ n'ihe gbasara ịchọ mma na gburugburu ebe obibi
Usoro ule a sara mbara, na-ekpuchi usoro okwu niile nke ụkpụrụ dị mkpa
Na-achọ nyocha ngwa ngwa ọdịda na mmezi mmezi
Nyochaa asambodo ngwaahịa na ụkpụrụ na mba ma ọ bụ mpaghara dị iche iche.
Nnwale Nnwale Mmepụta (PVT)
Oge mmeputa ihe bu oru mbu nke emeputara. Will ga-eguzobe usoro ntinye ụgbọelu iji lelee ma ọ bụrụ na ọdịda ọ bụla na usoro mmepụta ahụ, ị ​​ga-enyocha otu esi ebuli usoro a.
Dịka 500-2000 nkeji, ma ọ bụ karịa
Emeela DFM (Nzube Maka Nrụpụta) na ebu na njikere, enweghị mgbanwe emere na ngwa ọrụ
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ebumnuche niile ga-eresị ndị ahịa
Nyochaa mmepụta oke (mkpụrụ, oke, oge, oge ọrụ, wdg)
Usoro nhazi na usoro ọzụzụ zuru ezu
A ghaghị ịmepụta usoro nkwenye nke ogo (QA) na njikwa njikwa njikwa (QC) ma nwalee ya
Ruo ugbu a, akụkụ kachasị ụtọ nke PVT na-eche nzaghachi site n'aka ndị ọrụ mbụ gị.
CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Prototyping, Fast Prototyping, Otito Prototyping,